Carwo buugeedka Muqdisho wuxuu ahaa ishii isbedelka noloshayda. (Qormo) – Radio Daljir
Carwo buugeedka Muqdisho wuxuu ahaa ishii isbedelka noloshayda. (Qormo)
Agoosto 27, 2019 5:22 g 0
Sanadku waa 2015, goobtu waa Muqdisho, goortu waa bacdal makhrib, waa hotelkii la oran jiray City Palace, haddase loo yaqaan Royal Palace, waana carwo buugeedkii ugu horeeyey ee Muqdisho lagu qabtay, maalintii koowaad ee carwo buugeedka ayaa soo dhamaaday.
Miis ayaan ku fadhinaa rag dhowr ah, waxay ka mid ahaayeen martidii sanadkaas, waxaan ka xasuustaa Axmed Faarax Cali Idaajaa, Cismaan Maxamed (Aasaasaha madxafka Soomaalida ee Minneapolis). Waxaa nagu soo biirtay gabar aad u da’yar, 14 jir ayey ahayd, gabadhu waa Sucaad, waxay deganayd iyada iyo qoyskeedu guri aan ka fogayn halka hoteelka ku yaal, waa guri burbursanaa, laakiin duruufaha uun baa ku khasbay inay isaga dhex noolaadaan.
Xaafadda Cabdilcasiis ee hoteelka City Palace ku yaalo waxay ahayd meelihii dagaladdu sida xun u naafeeyeen, guryaha hoteelka ku hareeraysan waa wada burbursanaayeen, dad yar ayaana ku noolaa oo qoyska Sucaad ka mid yahay.
Cismaan oo ay Sucaad dhinaciisa fariisatay ayaa waraysi ku bilaabay, adeer magacaa, xaggee ka timid? Jawabihii ay u celisay kadib ayuu si quman u waraystay, iskuul ma dhigataa? Maya ayey ku jawaabtay.
Markaas ayey gashay gabadhii inay ka waranto xaaladda qoyskeedu ku sugnaa nolol ahaan, waxayna ka bilowday in ay fasalka sideedaad uga hartay waxbarashadii, markii aabaheed oo muruq maal ahaa uu ku soo booday xanuunka dhiig karka, wuxuuna ka curyaamay lugaha, gacmaha iyo qayb ka mid ah maskaxda, sariir ayuu saaran yahay, hooyo iyada laftigeedu waa xanuunley, Sucaad iyo shan carruur ahna waa kuwo ay ku adagtahay nolol meelkeedka, mana awoodin inay iskuul oo bishii laga rabo 20 dollar iska bixiyaan, sidaas ayaana keentay inay uga hartay waxbarashadii.
Raggii meesha fadhiyey sheekadii way damaqday, Cismaan ayaase goobtii ka sheegay inay ku noqoto waxbarashadii, isaguna uu bixinayo lacagta, uuna qoyska wax yar oo kale oo nolosha ay ku kabtaan ugu dari doono.
Balanqaadkii maalintaas wuu kaga dhabeeyey, telefonka qoyska ayuu qortay, wuxuuna bilaabay in lacag boqol doolar ah, mararka qaarna ay dheertahay dharka, buugta iyo ciiddaha uu qoyska si joogto ah ugu soo diro, waa wax aad u yar lacag ahaan, waase wax badan marka loo eego nolosha qoyska Sucaad oo markaas aysan jirin meel dakhli ka soo galo, waxayna u ahayd wax aad u badan.
Sucaad waxaan la kulmay 23kii bishaan Aogoosto 2019, madashaan kula kulmay waa isla barnaamijka carwada Muqdisho ee shan sano ka hor kiisii ugu horeeyey aan ku kullannay, markaan waa gabar aad uga duwan muuqaal ahaan iyo duruuf ahaan siday ahayd is arageenii koowaad.
Maxamed Cirro, ii waran, adeer isu kay sheeg, qofkaad tahay?, markaas ayey ii bilowday inay i xasuusiso miiskii habeenkii 2015 aan fadhinay iyo gabadhii yarayd ee noo timid inay iyada tahay.
Hadda Suscaad dugsi sare ayey dhamaysay, waxay kale oo sanad tababar dhinaca maamulka ah ka samaysay machad Muqdisho ku yaal, waxay iiga sheekaysay sheeko ka qurux badan tii maalintaas.
Waxay ka shaqayso laba shaqo, mar waa askariyad booliis ah, sidoo kale waxay wakhtiyo ka shaqaysaa xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxay mushahar ahaan u qaaddataa lacag 400 oo doolar ka badan, carruurta intii kale waxbarasho ayey aadan, waana qoys hadda si wanaagsan isu haysta, waxayna ku jirtaa jamacad heerkii koowaad ee digriiga.
“Habeenkaas aan miiska imanayey waxaan keliya oo islahaa bal soo arag dadka wax qora siday u egyihiin, ma dad ka waaweyn dadkaa, ma okiyaalo waaweyn ayay gashadaan, ujeedka aan miiskiina u imid intaas ayuu ahaa, markaan arkay inay dad cadiya yihiinna warkooda aad wax ka dhegeysatid ayaan is iri” ayey tiri Sucaad.
Waxay tiri Alle ayaa mahadleh waxaan kale oo u mahad celinayaa dadkii soo qaban qaabiyey carwo buugeedkaan oo ah kii Alle ka sokow fure u noqday inaan noloshayda guul ka gaaro, adiga iyo odayaashii qalinleyda ahaa ee habeenkaas meesha fadhiyeyna waan idin mahad celinayaa, waa sababta aan kuugu imid.
“Carwo buugeedka Muqdisho waa isha isbedelka noloshayda, waxanan u hayaa qadarin iyo abaal” ayey tiri Sucaad.
Anniga waa i faraxgelisay sida wax yar oo aad u kooban ay u bedeshahay nolosha qoys dhan. Hadda guri ay kiraysteen oo ay u dhan yihiin ilihii nololeed ee guri looga baahnaa ayaa qoyskii degan yahay, waxayna ku joogaan dhabihii horumarka.
Carwada Buuta Muqdisho oo shan sano jirsatay
Ma rabo inaan akhriste kaaga sheekeeyo madasha carwada buugta, waxaanse ka oranayaa waa madasha keliya ee arrimo bulsho ee sanadlaha ah ee dadka ugu badan oo dhalinyaro dumar iyo ragba ahi isuguyimaadaan, iyagoo ka helo dood cilmiyeedyo iyo buugaag kala duwan.
Naadiga Maskaxshiil oo ku lahaa teendho uu buugta ku iibinayey carwada buugta Muqdisho 2019, ayaa xubin ka mid ah oo markaas goobta fadhiyey waxaan wax ka waydiyey inuu cabiri karo wax isbedel ah oo la taaban karo oo isagu uu carwada buugta Muqdisho ka dareemay.
“Shansano ka hor, cid buug ku fekeraysay iyo iibsigiis ma jirin, anniga kula hadlayana ha ahaadee, haddda saddexda maalmood ee bandhigga socday buugta laga iibsaday teendhada aan joogo 500 boqol oo koobi way ka badan tahay, waxaa kale oo dheer boqolaal telefon oo nagu soo dhacaya, oo ah dad gobollada iyo Muqdisho ka soo hadlaya, lacagana soo dirsanaya oo buug leh noo qabta” ayuu yiri xubintii ka tirsanayd Maskaxshiil.
Waxaan anniga xaqiiqsaday in da’yarta ku hawlan carwadaas ee kala maaraynta, soo dhoweynta, daadihinta barnaamijyada iyo qaban qaabada ka shaqaynaya oo kuligood si mudatawacnimo leh u adeegaya ay yihiin rajo ummadda Soomaaliyeed u soo baxday, ayna wax badan ku kordhin doonaan dhismaha qaranka iyo dawladnimada Soomaaliya.
Sucaad waa qofka ila sawiran, wejigeeda waxaan u qariyey sababo la xiriira hawsha ay ummada u hayso
Ergayda Gaalkacyo ee shirka dib u heshisiinta Galmudug oo dhuusamareb gaaray. (Daawo)
ARDAA Xalqaddii 59aad: dib u heshisiinta & Dumuqraadiyada (dhegayso)